Deg Deg:Dawladda Suudaan OO xeelad cuusb kula Dhaqmaysa Dibed baxayaasha – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Dawladda Suudaan OO xeelad cuusb kula Dhaqmaysa Dibed baxayaasha
Baaritaan ay samaysay BBC-da qeybteeda Africa Eye ayaa lagu ogaaday caddeymo muujinaya in laamaha ammaanka ee Sudan ay adeegsadaan askar dharcad ah oo garaac, afduub iyo xarig isugu dara dibed baxayaasha dowladda ka soo horjeeda ee mudaharaadka ka dhiga wadooyinka caasimadda Khartoum.
Askartaasi ayaa ka garab shaqeeya booliska iyo milateriga si ay u kala eryaan dadka wadooyinka ku dibed baxaya, halka qaar ka mid ah dadkaasina ay uga daba tagaan guryahooda isla markaana lagu xiro goobo qarsoon iyagoo aan wax dembi ah lagu soo oogin, garaac iyo mararka qaar jirdilna loo geysto.
Shacabka Sudan ayaa bishii December ee 2018 waxa ay billaabeen inay ka mudaharaadaan sicirka cunnada ee sare u kacay, balse markii dambe waxa ay isu badeleen dibed baxyo lagu diidan yahay xukunka mudada 30-ka sano ka badan uu dalkaasi ku haysto madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir.
Dowladda Sudan ayaa ka ilaalisay kaamerooyinka telefishinnada inay tebiyaan dibed baxyada, balse shacabka caadiga ah ayaa telefoonnadooda gacanta ku duubay waxa dhacayay.
Previous Post: Ganacsato “halis galisay” caafimaadka shacabka Jigjiga
Next Post: Deg Deg Daawo sawiro:Al Shabaab oo soo bandhigay gaari ciidan oo dagaal ay ku qabsadeen